२०७७ पौष २२ बुधबार १३:४२:००
यही प्रक्रियाबाट कतिपय नेपालीहरुले पनि खोप लगाउन सफल भएका छन् । अमेरिकी सरकारको खोप वितरण सम्बन्धी नियमअनुसार पहिलो चरणमा पहिलो पङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मीहरु, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र र अत्यावश्यक सेवामा काम गरेकाहरु परेका छन् । अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा बस्दै आउनु भएकी रेखा जोशी पनि त्यसरी खोप लगाउनेमध्ये एक नेपाली छन् । उनले गत हप्तामात्र खोप लगाएको बताए । उनले आफनो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो ‘‘मैले मेरो देब्रे पाखुरामा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएँ, त्यसपछि मलाई १५ मिनेट आराम गर्नको लागि भनियो । त्यहीअनुसार आराम गरेँ र निस्कन खोज्दा मलाई अनुहारमा पसिना आएको अनुभूति भयो । मैले मास्क खोलेर म्यानेजरको नजिक गएर पसिना आएको बताएँ तर मलाई केही बेरपछि थाहा भयो कि त्यो पसिना कुनै ‘साइड इफेक्ट’ नभएर मानसिक तनावको कारण रहेछ ।
जोशीले भने ‘‘म धन्य रहेछु विश्वका करिब सात अर्ब मानिसले प्रतिक्षा गरिरहेको ऐतिहासिक खोपको पहिलो चरणमा नै लगाउने मौका मैले पाएँ ।’’ उनले आफनो जन्मस्थानको परिवेशदेखि जीवन यात्रा सम्झिएर आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको प्रतिक्रिया दिए ।
अमेरिकामा फूड एड ड्रग एडमिनिष्ट्रिशनले अत्यावश्यक प्रयोगको लागि अनुमति प्रदान गरेको कम्पनीमध्ये मोडर्ना कम्पनीको खोप लगाउन थालिएको हो । यो खोप लिने रेखाजस्तै करिब २० लाख अमेरिकीले आफूहरुलाई भाग्यमानी सम्झिएका छन् । उनीहरुले आफ्ना अनुभवलाई विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त पनि गरिरहेका छन् ।
कुराकानीको क्रममा उनले सरकारी मापदण्डअनुसार पहिलो पङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदान गरिने यो खोप उहाँको कार्यालयकै प्रशासन तथा व्यवस्थापन विभागमा काम गर्नेहरुले लगाउन पाएका छैनन् । तर नियमित प्रक्रियामा परेकाले आफूले लगाउन पाएको बताए ।
रेखाले खोप लगाउनका लागि दिएको फार्म हस्ताक्षर गरेको दिनको स्मरण गर्दै भने ‘‘क्रिसमसको अघिल्लो दिन हामीलाई विभिन्न उपहार दिन लागिएको थियो, म पनि पङ्क्तिबद्ध थिएँ, यसैक्रममा एकजना सहकर्मीले एउटा फर्म देखाउँदै भने, “तपाई खोप लगाउन राजी हुनुहन्छ ? मैले जवाफमा हुन्छ भन्या र हस्ताक्षर पनि गरेँ ।’’ शरीरमा खोप लगाउने नलगाउने भन्ने कुरा इच्छामा भरपर्ने भएकाले हस्ताक्षर गर्नु अगाडि उहाँसँग त्यसरी अनुमति मागिएको थियो ।
रेखाले नयाँ खोप लगाउने अनुमति दिएर घर त आउनुभयो तर उनमा बेचैनी शुरु भयो । कतै यो खोपले उल्टो असर पो गर्छ कि ? अथवा नयाँ खोप विश्वास पो कसरी गर्ने ? उनले भने ‘‘परिवारका सदस्यहहरुले हजारौँ मानिसमा परीक्षण गरेपछि ल्याएको खोपलाई विश्वास गर्ने गरी ढाडस दिएकाले मैले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ यो खोप लगाउने निर्णय गरेको थिएँ ।’’
यसैगरी न्यूयोर्कको हेल्थ केयर सिष्टममा कार्यरत हीरा कँडेल सापकोटा पनि खोप लगाउने अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमा परेका छन् । उनले खोप लगाउँदाको अनुभव बाँड्दै भन्नुभयो ‘‘मलाई खोप लगाउने बेलामा केही बढी दुखाई त भयो तर सहन नसक्ने भन्ने होइन ।’’ खोप लगाउन पाएर कोरोना भाइरसका विरुद्धमा विज्ञानले हासिल गरेको उपलब्धिलाई आत्मसात गरेको भन्दै कँडेल थप्छन्, ‘‘विज्ञानले गहिरो अनुसन्धान पश्चात मानवीय परीक्षणको चरण समेत पार गरेर उत्पादन गरिएको खोप लगाउन पाउँदा मलाई निकै खुशी लागेको छ ।’’
अमेरिकामा खोपको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्नुभएका डा सञ्जीव सापकोटा अहिलेसम्म मानिसहरुमा दिइएको कोभिड खोपमा त्यस्तो गम्भीर असर नदेखिएको बताउँछन्। केहीलाई सामान्य ज्वरो, दुखाई र खोप दिएको ठाउँमा सुनिने बाहेक अरु समस्या देखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । सापकोटाको भनाइ छ ‘‘खोप शतप्रतिशत नै प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने होइन ।’’